Caalamka, 15 December 2016
Khamiis 15 December 2016
Qiimaha Saliida oo Mar Kale Hoos u Dhacay
Qiimaha Saliida ayaa mar kale hoos u dhacaya kadib markii dhowaan sare u kac uu ku yimid markaasi oo uu gaaray 56 dollar halkii barmiil, qiimihii ugu sarreeyey muddo 18 bilood ah.
Dowladda Turkiga oo Xirtay Kurdiyiin Badan
Booliska Turkiga ayaa xiray ilaa iyo 118 sarkaal oo ka tirsan xibiga (HDP) ee taageero dadka Kurdiyiinta Turkiga, kadib markii ay Dowlada ku eedeysay in xisbigani uu xiriir la leeyahay kooxda fallaagada PKK ee dagaalka kula jirto dowladda Turkiga.
Magaalada Qaahira oo ay 25 Qof ku Dhinteen
Dalka Masar, Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay maanta kaniisad ku taalla magaalada Qaahira oo qarax bambaano lala eegtay. Dowladda Masar ayaa weerarkan ku eedeynsa inay ka danbeeyaan kooxo xiriir la leh ururkii Akhaanul-Muslimiinka.
Turkiga oo Maanta Ku dhawaaqay Baroordiiq Qaran
Dowladda Turkiga ayaa waxaa maanta lagu dhawaaqay maalin qaran oo baroordiiq ah oo loo murugoonayo 20 qof oo ku dhintay qaraxyo mataanno ah oo habeenkii Sabtida ka dhacay garoon ciyaaraha lagu ciyaaro oo ku yaalla magaalada Istanbul.
Laba Qarax oo ka Dhacay Dalka Turkiga
In ka badan labaatan qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo ka dhacay garoonka kubadda cagta ee magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Baarlamanka K/Koonfureed oo Xilka Ka Qaaday Madaxweynaha
Golaha Qaranka Korea-da Koonfureed ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaas Park Geun-hye.
Norway: Wiil Loo Qabtay Dilka 14 Jir Soomaali ah
Booliska dalka Norway ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen wiil 15 sano jir ah oo labo maalmood ka hor dil u gaystay wiil Soomaaliyeed oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabay Yacquub Cabdullahi Xasan.
In ku Dhow 100 oo ku Dhimatay Dhulgariir ka Dhacay Indonesia
Tirada dhimashada dhulgariir xooggan oo aroornimadii arbacada ku dhuftay dalka Indonesia ayaa sare usii kaceysa.
Afti ka Dhacaysa Talyaaniga oo Saamayn ku Leh Midawga Yurub
Waxaa maanta Talyaaniga ka dhacaysa afti doorasho taas oo shacabka dalkaasi ay ugu codeynayaan arrimo taabanaya xidhiidhka ay la leeyihiin Midawga Yurub iyo weliba awoodda dawladda.
Sweden: Aabo ka Hadley Dilka Wiilashiisa
Aabaha Laba wiil oo Soomaali ah oo xalay toogasho lagu dilay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden oo wareysi gaar ah VOA-da siiyey ayaa sheegey faahfaahinta dhacdada.
Labo Soomaali ah oo Lagu Dilay Sweden
Labo wiil oo Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyada oo la sheegay in dadka dilka geystay ay ahaayeen kuwo wajiga soo duubtay